Taariikhda ay taageerayaasha Man United markii ugu horreysay isagoo ku ciyaaraya Old Trafford ku arki doonaan Ibrahimovic oo daaha laga rogay – Gool FM
Taariikhda ay taageerayaasha Man United markii ugu horreysay isagoo ku ciyaaraya Old Trafford ku arki doonaan Ibrahimovic oo daaha laga rogay
(Manchester) 13 Luuliyo 2016 – Saxiixa cusub ee kooxda Manchester United Zlatan Ibrahimovic ayaa la filayaa in kulankiisa ugu horreeya ee uu ku ciyaari doono garoonka Old Trafford uu noqdo kulanka lagu maamuusayo Wayne Rooney, kaasoo dhici doona 3 bisha Agoosto ee soo aaddan.
Weeraryahanka Swedish-ka ayaa u saxiixay Man United heshiis uu todobaadkii ku qaadan doono £200,000 kaddib markii 34 sano jirkaan uu heshiiskiisii kooxda Paris Saint-Germain ka dhacay horraantii xagaagan.
Taageerayaasha Man United ayaa doonaya inay arkaan Superstar-ka joogga dheer oo ku ciyaaraya garoonkooda Old Trafford, waxaana sida laga soo xigtay website-ka rasmiga ah ee Man United ay taasi u muuqataa inay dhici doonto kulanka lagu maamuusayo Rooney oo ay ka horjeedaa Everton bisha soo socota.
Ibrahimovic ayaa soo bandhigay sawirro isagoo maalmihii dhawaa fasax qaadanaya, kaddib markii laga soo reebay tartanka Euro 2016.
Man United ayaa kulanka ugu horreeya ciyaaraha ay isugu diyaarinayso xilli ciyaareedka cusub waxa ay wajahayaan Wigan Athletic 16 bishan July, ka hor inta aysan u duulin shiinaha halkaasoo ay kula ciyaari doonaan kooxaha Borussia Dortmund, Manchester City iyo Galatasaray.
Si kastaba ha ahaatee, waa wax iska cad in Ibrahimovic uu ka qeyb qaadan doono midkood kulamadaas ka hor ciyaarta lagu maamuusayo Rooney ee ka dhacaysa garoonka Old Trafford.
Barcelona oo ku dhaw dhamaystirka saxiixa Lucas Digne
Laacibka diirada u saaran Arsenal ee Gonzalo Higuain oo dalab qaali ah ka diiday kooxaha shiinaha